Maxaa Ka Jira Wararka Sheegaya In Man City Ay Lacag Gaareysa £433 Milyan Usoo Bandhigatay Lionel Messi Si Uu Ugu Soo Biiro? – Jawaab Ayay Bixiyeen – Garsoore Sports
Kooxda Manchester City ayaa jawaab ka bixisay wararka sheegaya in lacag gaareeysa £433 milyan ay u diyaarisay suuqa xagaaga si ay ula soo saxiixdaan xiddiga xulka Argentina iyo kooxda Barcelona ee Lionel Messi.
Cayaaryahan Messi ayaa u muuqday inuu qarka u saaranyahay inuu ka tago Barca kaddib khilaaf xooggan oo ka dhashay qandaraaskiisa kooxda Catalonia oo isaga iyo madaxweynaha kooxda Joseph Bortomeu ay is qabteen xagaagii hore hayeeshee 33 jirkan ayaa kusii negaaday garoonka Camp Nou ee kooxda Barcelona.
Si kastaba ha noqotee Messi wuxuu galay affartii billood ee ugu dambeysay qandaraaskiisa kooxda waxaana uu xor u yahay inuu wadahadallo la yeesho kooxaha xiisaha u muujinaya isagoo sii eeganaya meesha uu jaanta dhigayo safarkiisa xiga.
kooxaha xiiseeynaya xiddigan waxaa kamid ah hoggaamiyeyaasha horyaalka Premier League-ga Manchester City oo sidoo kale kamid ah kuwa ugu cadcad saxiixa laacibkan reer Argentina.
Weeraryahankan, oo dad badani ay u arkaan inuu yahay cayaaryahanka ugu wanaagsan taariikhda kubbada-cagta ayaa u furnaan lahaa fikradda ah inuu kula midoobo tababare Pep Guardiola garoonka Etihad.
Sida laga soo xigtay The Sun, City ayaa la timid xirmo cusub oo qiimihiisu ku dhowyahay 433 milyan oo Pound si ay u dhammeystirto saxiixa bilaashka ah ee laacibkani.
Hayeeshee, waxay u muuqataa in kooxda ka cayaarta Ligue 1ka ee PSG ay weli ku dagaalameyso loolanka loogu jiro cayaaryahankan 6da jeer ku guulleeystay abaalmarinta Ballon D’or.
Si kastaba ha noqotee, kooxda City ayaa si kulul u beenisay wararka dhowaanahan la isla dhexmarayay warbaahinta
Afhayeen u hadlay kooxda City ayaa yiri ” Ma jiraan wax dalabyo ah oo la sameeyay xagaaga ama wixii ka dambeeyay, mana jiraan wax wada hadal ah oo aan ku jirno haatan”